Salaamanews » Isku soo dhawaasho dhinaca siyaasadda ah oo ka socota Puntland
Home » Warar Isku soo dhawaasho dhinaca siyaasadda ah oo ka socota Puntland Print - Daabace: SalaamaNews - Jan 2nd, 2013 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Muqdisho: Seddex askari oo xukun dil ahaa lagu fuliyayMaxkamadda ciidamada oo Baledweyne ku xukuntay 13-eedeysaneQaraxyo iyo dilal kala duwan oo ka dhacay Magaalada MuqdishoDoqeyn lala eegtay kolonyo Gaadiid oo ka dhacday Jubada hooseErag “15-dhallinyaro la qalday ayaan hubkoodii ku soo qabanay”
(Salaamanews)-Ciidamda baliiska Puntland ayaa aad u xoojinaya ammaanka magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland, iyadoo laga baqanayo firxadka kooxda Al-shabaab ee gaaray deegaannada Puntland inay geystaan falal amni xumo oo looga faa’iideysanayo siyaasadda isku hor gudban ee maamulka.
Muran aad u xoogan ayaa meeshii ugu darneyd hadda maraayo, kaasoo u dhexeeya siyaasiyiinta, waxgaradka iyo madaxweynaha talada haya xisbigiisa HORSEED, waxaana dadku ka soo horjeedaan in sanad uu kororsado madaxweyne Faroole oo la sheegayo in waqtigiisa uu kaga haray 6-maalmood.
Wararku waxay tilmaamayaan inaan magaalada Garoowe loo ogoleyn kuwa qaadacsan siyaasadda madaxweynaha, waxaana jira wafdi ka socda madaxtooyada oo kulamo waxgaradka kula kala qaadanaya magaalooyinka Garoowe, Boosaaso iyo Qardho.
Saraakiisha Puntland ayaa sheegay in ammaanka loo adkeeyay sababo la xiriira cabsi laga qabo in kooxda Al-shabaab ay geysato dil lamid ah midkii loo geystay taliyihii ciidamada baliiska Cabdullaahi Xuseen oo sanadkii hore la khaarijiyay.
Booliska ayaa la arkayay xalay iyagoo istaajinaya gaadiidka, waxaana la sheegay in howlgalka lagu qabtay dad aan la shaacin tiradooda.
Booliska ayaa sheegay in dilkii dhowaan magaalada loo gaystay Gaashaanle Sare Cabdullahi Xuseen loo qabtay dad lala xiriirinayo inay ka dambeeyeen dilkiisa, maxkamadna la soo taagi doono xilli dhow.
Puntland ayaan la ogeyn sida ay siyaasadeedu noqon doonto, waxaana laga cabsi qabaa in is afgara waaga taagani uu keeno dhiig badan oo daata, taasina waxay keeni kartaa isku dhac mar kale qarxo.
Tags: warar « Qoraalkii HoreMaxkamadda Addis-Ababa oo la soo taagay 10-ruux oo ku xiran ururka Al-shabaab	Qoraalka Xiga »Somaliland oo ka hadashay shilkii ugu xumaa oo ka dhacay Hargeisa	Halkan Hoose ku Jawaab